Filtrer les éléments par date : vendredi, 12 juillet 2019
vendredi, 12 juillet 2019 22:41
Moramanga: Lanonana famoahana ofisialy ny andiany miisa telo avy ao amin’ny Sekoly ambonin’ny Zandarimariam-pirenena
Zandary miisa 154 no navoaka ofisialy androany tao amin’ny Sekoly ambonin’ny Zandarimariam-pirenena Moramanga, Faritra Alaotra Mangoro, rehefa niofana nandritra ny volana vitsivitsy.
Mitsinjara ho andiany telo izy ireo, dia ny andiany faha-24 nanaraka ny « Cours supérieurs de commandement », ny andiany faha-43 avy amin’ny « Cours d’Application des Officiers » ary ny andiany faha-57 nanaraka ny « Cours de Brevet professionnel de premier degré ».
Nanome voninahitra ny lanonana ny praiminisitra lehiben’ny governemanta Ntsay Christian. Nanao antso avo ho an’ny Foloalindahy, ny Zandary ary ny Polisim-pirenena, ny Lehiben’ny governemanta, ny hamerenana indray ny hasin’ny firenena mba ho tena firenena mandàla ny fahamarinana.
vendredi, 12 juillet 2019 22:36
Fahatongavan’ny Barea: Polisy 950 no indray hahetsika
Hanampy ireo amperin’asa hisahana ny fandrindrana ny fifamoivoizana sy ny fitandroana ny filaminana, hanomezana voninahitra ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny fahatongavan’izy ireo an-tanindrazana rahampitso tolakandro.
Hafaliana, fahamendrehana, firaisankina no 'ndeha hitsenantsika rehetra azy eny an-dalana hihazo ny renivohitra, hoy ny fanentanana ataon’ny Polisim-pirenena.
vendredi, 12 juillet 2019 22:35
Barea an’i Madagasikara: Hotolorana mari-boninahitra ireo mpilalao ho fankasitrahana
Hijanona mandritra roa andro eto Madagasikara ireo mpilalaon’ny Barea aorian’ny fahatongavany rahampitso, mialoha ny hamonjen’izy ireo indray ny klioba ilalaovany avy any ivelany any.
Tafiditra anaty fandaharam-potoanan’izy ireo ny handraisan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina azy ireo ao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra, sy ny fiaraha-misakafo aminy eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha, amin’izay koa no handraisan'ireo mpikambana mandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra tsirairay avy ny mari-boninahitra ho fankasitrahana ny zava-bitan’izy ireo ho an’ny firenena.
Barea an’i Madagasikara: Ireo lalana handalovany amin’ny fatongavany
Ny sabotsy 13 jolay amin’ny 3ora tolakandro no vinavinaina hahatongavan’ny fiaramanidina mitondra ny Barea an’i Madagasikara, avy niatrika ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika andiany faha-32 tany Egypta.
Araka ny fampahafantarana ataon’ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena ao amin’ny pejiny facebook dia ireto avy ny lalana handalovan'ny Barea miainga avy eny Ivato: Talatamaty - Ambohibao - Digue - 67 Ha - Andavamamba - Ampefiloha - Anosy.
Eny amin'ny CCI Ivato no apetraka ny fiara rehetra ho an'ireo izay ho eny amin'ny seranam-piaramanidina hitsena ny Barea.
vendredi, 12 juillet 2019 19:44
Kitra - Barea: Tsy handalo aty Madagasikara i Romain Métanire sy Abel Anicet
Tsy ho tafaraka amin’ireo mpilalao namany ho aty Madagasikara i Romain Métanire, vodilaharana ankavanana ao amin’ny Barea an’i Madagasikara sy Abel Anicet, irakiraka.
Antsoin’ireo klioba ilalaovany avy izy ireo, ka tsy maintsy nandeha avy hatrany, dia ny klioban’ny Minnesota United any Etazonia ho an’i Métanire, ary ny klioban’ny Ludogorets Razgrad any Bolgaria ho an’i Anicet.
Toamasina: Voasambotra ilay gadra nitsoaka
Tra-tehaky ny mpandraharaha ny fonja, tao Analakininina – Toamasina ny alakamisy 11 jolay, ilay voafonja nitsoaka teny an-dalana nentina namonjy mpitsabo raha nilaza narary ny 27 novambra 2018.
Voaheloky ny Fitsarana ambony roa taona an-tranomaizina, sazy mihatra, izy noho ny hosoka amin’ny raharaha tany.
Ireo mpandraharahan'ny fonja avy amin’ny sampana hery vonjy taitra no nisambotra azy taorian'ny angom-baovao azon'izy ireo.
vendredi, 12 juillet 2019 19:22
Barea an’i Madagasikara: Caire – Istanbul – Ivato ny diany
Anio amin'ny 10 ora alina eo no hiala ao Caire renivohitr’i Egypta ny Barea an’i Madagasikara. Hihazo an'i Istanbul any Torkia ny fiaramanidina mitondra azy ireo, ary higadona eny Ivato rahampitso sabotsy 13 jolay amin'ny 3ora latsaka folo tolakandro.
vendredi, 12 juillet 2019 12:45
Adrien Melvin: « Izay no vokatra, ny hoavy no banjinina »
« Niezaka mafy izahay mba nanome hafaliana ho an'ny Malagasy rehetra », hoy i Adrien Melvin, mpiandry haraton’ny Barea an’i Madagasikara taorian’ny faharesen’ny ekipam-pirenena malagasy teo amin’ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika andirany faha-32, nanoloana an’i Tonizia.
« Izay no vokatra, ny hoavy no banjinina ; Misaotra sy mankasitraka ho an'ny Malagasy rehetra », hoy izy nanohy.
Rahampitso tolakandro no higadona eny Ivaro ny Barea an’i Madagasikara. Maneho ny faniriana i Adrien Melvin mba hampitaina mivantana amin’ny Televiziona Malagasy ny fahatongavan’ny Barea « mba ho hitan'ny rehetra manerana an'i Madagasikara ny firaisankinam-pirenena », hoy izy.
vendredi, 12 juillet 2019 12:42
Kitra – CAN 2019: Hatao amin’ny 14 jolay ny lalao manasa-dalana
Fantatra avokoa ireo ekipa efatra tafakatra amin’ny lalao manasa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, andiany faha-32. Sénégal, Alzeria, Nizeria ary Tonizia.
Tanterahina ny andron’ny alahady 14 jolay avokoa ireo lalao manasa-dalana roa, dia Sénégal sy Tonizia andaniny, ary Alzeria sy Nizeria ankilany.
Amin’ny 17 jolay ny lalao fiadiana ny laharana faha-3, amin’ny zoma 19 jolay kosa ny lalao famaranana.
vendredi, 12 juillet 2019 12:38
Tsaratanàna: Nihena ny fakana an-keriny, ny famonoan’olona
Efa nahazoana vokany ny ezaka nataon’ireo mpitandro ny filaminana, taty amin’ny Distrikan’i Tsaratanana, hoy ny Praiministra Ntsay Christian tamin’ny diany taty an-toerana. Nihena ny fakana an-keriny, ny famonoan’olona, ny tsy fifampitokisana teo amin’ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana, na dia mbola misy tranga vitsivitsy indraindray aza.
Tsy maintsy mbola hisy ezaka vaovao hatao hoy izy, ary hodinihina tsirairay ny toerana hanamafisana ny fiarovana sy ny vokatra mety ho azo amin’ny fepetra raisina amin’izany toerana izany.
Nanolotra fisaorana ho an’ireo mpitandro ny filaminana izay mandray anjara amin’ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra ny Praminisitra, nandritra ny fitsidihana rehetra nataony taty an-toerana.